Diversity sy Marketing | Martech Zone
Diversity sy Marketing
Alarobia, Oktobra 18, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Afaka namaky lahatsoratra iray momba ny Diversity niaraka tamin'ny namako vaovao iray aho, JD Walton. JD dia nandefa bilaogy iray izay mivarotra ny Blacks in Business. Tantara fahombiazana amerikana izy ary te hizara ny zavatra niainany tamin'ny hafa.
Nampientanentana ahy izany ka nanana hanoratra momba ny eritreritro momba ny fahasamihafana. Inona no ifandraisan'ny fahasamihafana amin'ny Marketing sy Automation? Inona no ifandraisany amin'i Doug, ity lehilahy fotsy hoditra 38 taona matavy ity? Ny zava-drehetra! Ny firenentsika sy ny tontolontsika dia mihabe isan-karazany isan'andro. Ny Internet dia lasa vilany tena mandronono satria tonga amin'ny besinimaro ny fidirana mora sy ny fitaovana.
Tokony hanaja sy hiresaka amin'ny firazanana sy fanekem-pinoana ary ny lahy na vavy ianao raha te hahomby. Raha maniry hitombo ny orinasanao, dia tsy maintsy samihafa ihany koa ny orinasanao. Tsy azo atao ny manompo sombin-tsena amin'ny fomba mandaitra raha toa ka tsy manana fampidirana avy amin'io sehatry ny tsena io ianao.
Ny olona sasany dia mijery anaty fandaharana isan-karazany ny ao anatiny ary mampiasa azy io ho fialan-tsiny amin'ny tsy fampiroboroboana na firesahana amin'ny olon-kafa lasa faran'izay mialoha. Mino aho fa tsy hahita lavitra izany ary angamba tsy mahalala kely. Ny fametrahana fampiroboroboana amin'ny firazanan'ny olona, ​​ny maha-lahy na vavy, sns dia afaka ary hanokatra fotoana mety amin'ny orinasa ary koa amin'ny tsirairay.
Ity ny fanontaniana an-tapitrisany dolara… rehefa mitombo ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana mavitrika ny vitsy an'isa sy ny vehivavy, dia hanana fotoana vaovao ho an'ny olona rehetra ao anatin'io orinasa io. Ilay akoho na atody. Angamba ianao tsy ho nanana fotoana ambony hampiroboroboana raha tsy nanana io toeram-piasana isan-karazany io!
Voafaritra ny fiovana Google Advanced Search
Oct 22, 2006 amin'ny 9: 35 AM
Lahatsoratra nandinika izany. Heveriko fa fonosana tsara ny fehezanteny farany nataonao.
11 Nov 2006 tamin'ny 8:07 PM
Taloha dia ny resaka fandraisana mpiasa vitsy an'isa dia olana ara-pitondrantena, avy eo nanjary olana ara-barotra, ankehitriny dia olana momba ny fahamaimaizana. Tsy ho ela dia asa bebe kokoa noho ny olona hameno azy ireo izany, antony iray amin'ny fanondranana ivelany. Doug ianao tsy afaka miantso ny tenanao ho fotsy hoditra 38 taona matavy, miaraka amin'ny filazanao hoe tsara tarehy sy mahafatifaty. Ny famaritanao ny tenanao, dia ampahany amin'ny fahasamihafana ary iharan'ny sterotypes. Ny ankamaroan'ny tovolahy fotsy dia mieritreritra fa ny fahasamihafana dia midika hafa, fa raha ny tena izy, ny olona rehetra dia miavaka amin'ny vondrom-piarahamonina maro karazana, samy hafa, taona, habe, firafitry ny mpianakavy, fironana ara-nofo, politika ary fantatsika tsara, miralenta sy firazanana. Lahatsoratra tsara